लकडाउनमा नागिनको बिन्दास लुक ! – Ktm Dainik
लकडाउनमा नागिनको बिन्दास लुक ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
लकडाउनमा नागिनको बिन्दास लुक !
काठमाडौं । जि टिभीको शो जमाई राजा बाट चर्चित अभिनेत्री निया शर्मा आफ्नो फोटो र भिडियोका कारण अहिले चर्चित छिन्।
निया शर्मालाई उनको शुरुआती क्यारियरको समयमा स्किनिंग शैलीको कारण धेरै धम्की दिइएको थियो।
तर समय परिवर्तन भयो र आज निया शर्मा टिभी जगतमा चर्चित अभिनेत्री मध्ये एक हुन् जसले आफ्नो सुन्दरता र सेक्सी शैलीका कारण प्रशंसक हरूको हृदयहरूमा शासन गरिरहेकी छिन ।
निया शर्माको कामको बारेमा कुरा गर्दा नियाले धेरै कार्यक्रम र वेब श्रृंखलाहरू गरिसकेकी छिन्।
विक्रम भट्टको ट्युटेड १ र २ बाहेक निया शर्माले मोडलिङ पनि गरेकी छिन्।
यस बाहेक उनी खतरो के खिलाडी रियालटी शो पनि सहभागी थिइन्। निया संगै उक्त सिजनमा उनीसंगै स्क्रिन पार्टनर रवि दुबे पनि थिए। दुईटैले जमाई राजा धारावाहिकमा सँगै काम गरेका थिए।
निया शर्मा लाई हाल एकता कपूरको शो नागिन ४ मा कलर्समा देख्न सकिन्छ। कार्यक्रममा निया संगै बिग बास १३ की रश्मि देसाईको पनि अभिनय रहेको छ ।
निया शर्माको सर्वश्रेष्ठ फोटोहरू हेर्नुहोस् …….
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जमाइ राजा’ बाट चर्चामा आएकी नायिका निया शर्मा फेरि एकपटक सञ्चार माध्यममा छाएकी छन् । उनको ‘हट’ र ‘बोल्ड’ फोटोले उनलाई सबैभन्दा सेक्सी एशियन महिलाको सूचिमा तेश्रो नम्वरमा उभ्याएको छ ।
बेलायतबाट प्रकाशन हुने एक पत्रिकाले जारी गरेको सबैभन्दा सेक्सी एशियन महिलाको पहिलो नम्वरमा भने दीपिका पादुकोणलाई राखेको छ भने दोश्रोमा प्रियंका चोपडा परेकी छन् । तेश्रो नम्वरमा भने कैटरिका कैफ, आलिया भट्टजस्ता सुन्दरीलाई पछि पार्दै निया शर्मालाई उभ्याइएको छ । यसले उनका फ्यानहरू धेरै खुसी भएको बताइएको छ ।
निया यो उपलब्धिबाट धेरै खुसी छिन् र यो सूचिलाई सामाजिक सञ्जालमा पस्केर सार्वजनिक गरेकी छन् । नियाले आफ्नो करिअरको सुरुवात ‘एक हजारों में मेरी बहना हैं’ मा कुणाल टंडनको विपरिताको भूमिकाबाट गरेकी थिइन् । यसपछि उनले ‘जमाई राजा’ मा दमदार भूमिका निभाएकी हुन् ।
उनी टेलिभिजन शो बाहेक विभिन्न अवार्ड वितराण समारोहमा पनि निकै सेक्सी प्रस्तुती दिएर चर्चामा रहने गरेकी छिन् । नियाको सुन्दरता र उनका सेक्सी अन्दाजको फोटोहरूले उनलाई यसको हकदार बनाएको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, वैशाख २६ २०७८ १७:१४:४०